Chiedza Chekuvhiya, Tafura Inoshanda, Chiremba Pendant - Wanyu
Mechnical Inoshanda Tafura
Magetsi Anoshanda Tafura
Magetsi Mota Type
Magetsi Hydraulic Rudzi
Gynecological Inoshanda Tafura
Ophthalmic Inoshanda Tafura
Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd. inonyanya kuita basa rekutengesa zvigadzirwa zvekurapa, ichitarisa kushambadzira kwemidziyo yekushandisa, kusanganisira mwenje unoshanda, matafura ekushanda, uye pendende dzekurapa. Mutsara wese wezvigadzirwa unotengeswa pasirese pasirese, uye isu tine vakasarudzika vamiriri vevamiriri munyika zhinji muEurope neAmerica.
Makore 16 ruzivo
Zvinopfuura makumi matanhatu zvigadzirwa
Mutengesi weGoridhe: 13
LEDD500 / 700 Ceiling LE ...
Nhanganyaya LEDD500 / 700 inoreva kune mbiri dome LED chipatara kurapwa kwechiedza. Chipatara chekurapa mwenje dzimba dzakagadzirwa nealuminium alloy ine gobvu realuminium ndiro mukati, izvo zvinobatsira kwazvo pakupisa kupisa. Girobhu racho igirobhu reOSRAM, yero uye chena. Iyo LCD inobata skrini inogona kugadzirisa kujekesa, tembiricha tembiricha uye CRI, ese ayo anogadziriswa mumatanho gumi. Ruoko runotenderera runotora isingaremi ruoko rwealuminium yekumira chaiko. Pane sarudzo nhatu dzematsutso maoko, ...
LED D620620 Ceiling akatungamirira ...
Nhanganyaya LEDD620 / 620 inoreva kune mbiri dzimba dzimba dzakakwiridzirwa kwechiremba chekushandisa mwenje. Chigadzirwa chitsva, icho chagadziriswa pamusoro pechigadzirwa chepakutanga. Aluminium alloy shell, yakagadziridzwa chimiro chemukati, zvirinani kupisa kupisa maitiro. 7 mwenje ma module, akazara e72 mababu, maviri mavara eyero uye machena, emhando yepamusoro OSRAM mababu, tembiricha tembiricha 3500-5000K inogadziriswa, CRI yakakwira kupfuura 90, mwenje unogona kusvika 150,000 Lux. Iyo yekuvhiya pani ndeye LCD inobata skrini, kuvhenekera, ruvara ...
LED D730740 Ceiling akatungamirira ...
Nhanganyaya LEDD730740 inoreva mbiri petal mhando yekurapa kwechiedza kuvhiya. Yekushandisa kamuri ine bhokisi rekuchenesa, iyo petal mhando inogona kudzivirira kudzikamisa kuyerera kwemhepo uye inoderedza zvakanyanya nzvimbo dzekusagadzikana mune laminar mweya kuyerera. LEDD730740 mbiri yekurapa mwenje yekuvhiya inopa hukuru hwekuvhenekera hwe150,000lux uye hukuru huturu tembiricha ye5000K uye max CRI ye95. Ma parameter ese anogadziriswa mumatanho gumi paLCD touch screen control panel. Mubato wakagadzirwa nezvinhu zvitsva, resistan ...
LEDD500 / 700C + M Kudenga ...
Nhanganyaya LEDD500700C + M inoreva kune mbiri dome LED nzvimbo yekushandisa mwenje. Yakavakwa-mukati kamera system uye yekunze yakaturika Monitor inogona kushandiswa kudzidzisa chinangwa. Iyo inogonesa kuongorora uye kurekodha mashandiro. Nyorera ku ■ kuvhiyiwa mudumbu / kwakajairika ■ gynecology ■ kuvhiyiwa kwemoyo / kwevascular / thoracic ■ neurosurgery ■ orthopedics ■ traumatology / emergency OR ■ urology / TURP ■ ent / Ophthalmology ■ endoscopy Angiography Feature 1. Kamera System Yakavakirwa-mukati kamera, hapana chikonzero chekurembera. iyo neimwe seti ...
TS Chinyorwa Hydraulic Su ...
Nhanganyaya TS hydraulic yekuvhiya tafura iri sui ...
TDY-1 China Magetsi M ...
Nhanganyaya TDY-1 yemagetsi inoshanda tafura ado ...
TDY-Y-1 Multi-chinangwa ...
Nhanganyaya TDY-Y-1electric hydraulic operatin ...
FD-G-2 China Magetsi ...
Nhanganyaya FD-G-2 inoshanduka-shanduka tafura yekusununguka i ...
TS-D-100 Kaviri Electr ...
Nhanganyaya TS-D-100 inoreva huviri ruoko elec ...
TS-DQ-100 Kaviri Ruoko E ...
Nhanganyaya TS-DQ-100 inoreva ruviri ruoko ele ...
QF-JX-300 China ICU Ini ...
Nhanganyaya QF-JX-300 inoreva ICU yekurapa br ...
TD-TS-100 Factory Di ...
Nhanganyaya TD-TS-100 inoreva kurapa kwakabatana ...
Haikwanise here sirin'i Inoshanda Mwenje kuisirwa mune KANA Kamuri ine Yakadzika Pasi Kureba?
Mumakore mazhinji ekutengesa uye neruzivo rwekugadzira, isu takaona kuti vamwe vatengi vanovhiringidzika kana vachitenga mwenje unoshanda. Yezve denga rekushandisa rinoshanda, kukwirira kwayo kwakaringana ndeye 2.9 metres. Asi muJapan, Thailand, Ecuador, kana mamwe ...
Iyo Belated Kugadzirisa odha yekushandisa Chiedza
Kana vatengi vekunze vachiti ini handina kumbobvira ndatenga rako rekushandisa mwenje, hunhu hwayo hwakavimbika here? Kana kuti uri kure neni. Chii chandinofanira kuita kana paine dambudziko remhando? Zvese zvekutengesa, panguva ino, zvinokuudza kuti zvigadzirwa zvedu ndizvo zvakanakisa. Asi unovadavira zvechokwadi here? Sezvo purofesa ...
Kero: Kamuri 1401, Shangcheng International Kuvaka, No.505, Caoyang Road, Shanghai